ပညာရေး | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
ပညာရေး	မေးခွန်းအားလုံးကို မြင်တွေ့စေရန် ညာဖက်အစွန်ရှိ (Calculate ဘေးမှ တြိဂံ)ခလုပ်ကို နှိပ်ပါ။ မေးခွန်းများ Drop Down ကျလာမည်။
ဒီနှစ် ပညာရေး ကံကောင်းပါ့မလား။ ဖြေထားတဲ့ စာမေးပွဲ အောင်ပါ့မလား။ နောက်ထပ် ဒီပလိုမာတစ်ခု ထပ်တက်ရင် အကျိုးရှိပါ့မလား။
သင်ထားတဲ့ ပညာနဲ့ လုပ်စားရပါ့မလား။ ဒီပညာ(သင်တန်း)ကို သင်မယ်ဆိုရင် အကျိုးရှိပါ့မလား။ နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသွားသင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းရှိပါ့မလား။ ပညာရေး ဆုံးခန်းတိုင်အောင် ရောက်ပါ့မလား။ (ဘွဲ့မှ ရပါဦးမလား)
လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ အောင်မလား။ စာမေးပွဲမဖြေခင် ဘာအဆောင်ယတြာတွေလုပ်ရမလဲ။ အခုဝင်ဖြေမယ့် စာမေးပွဲမှာ အောင်မြင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းရှိမလား။
<br /> 47 comments on “ပညာရေး”	min zaw on August 27, 2010 at 12:00 am said:
coming exam can pass or not
min zaw on August 27, 2010 at 12:08 am said:
this years education is lucky or not?
Thet Myat Noe on September 5, 2010 at 7:48 pm said:
နိင်အောင် on October 4, 2010 at 6:13 pm said:
ုko ko on October 7, 2010 at 8:38 pm said:
ei tar tun on November 3, 2010 at 2:21 pm said:
Yee Mon on November 11, 2010 at 10:14 am said:
Yee Mon on November 15, 2010 at 10:22 am said:
အခုဖြေရမဲ့ စာမေးပွဲ က အောင်ပါ့မလား
orchid on November 19, 2010 at 10:30 pm said:
သူဇာ on November 19, 2010 at 11:25 pm said:
ကောင်းထိုက်စံ on December 3, 2010 at 3:38 am said:
yin on January 12, 2011 at 10:21 pm said:
မွေးနေ့ ၇.၃.၁၉၇၉ ဗုဒ္ဓဟူး သမီးပါ ဆရာ
ဟူးရားဂဏန်း ၁၀၀ ပါရှင်
ပညာရေး အခြေအနေသိချင်လို့ပါဆရာ အဖုအထစ်တွေများနေလို့ပါဆရာ အခု မဟာစာတမ်း စ ပြုစုနေပါတယ်ရှင်…advisor နဲ့ အဆင်မပြေတာတွေများနေလို့ပါဆရာ…
win min thu on January 26, 2011 at 9:10 pm said:
ဆရာ ကျွန်တော်က ၆.၇.၁၉၈၈ ဖွားပါ
ဟူးရာဂဏန်း ၄ ပါဆရာ
မဟာ Thesis လုပ်နေပါတယ်ဆရာ
အဆင်ပြေမလား သိချင်ပါတယ်ဆရာ ချောချောမွေ့မွေ့ ပြီးနိုင်မလား သိချင်ပါတယ်ဆရာ
ဆုမြတ် on March 20, 2011 at 8:00 am said:
myo ma ma on July 16, 2011 at 4:25 pm said:
သမီးက (7.7.94)ခု ဖွား ကြာသပတေးသမီးပါ
အခု သင်တန်းတွေနဲ့ အဆက်ပြတ်နေတာ2လ လောက်ရှိပါပြီ
Jc Rio on July 29, 2011 at 7:16 pm said:
ကျွန်တော့မွေးနေ့ က (13.9.94)ပါ.အင်္ဂါနေ့မွေးတာပါ…ကျွန်တော ပညာကို ပါရဂူ ဘွဲ့ အထိ ရချင်ပါတယ်..ဖြစ်နိုင်ပါသလား..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
aye aye on September 5, 2011 at 2:19 pm said:
yu yu naing on September 27, 2011 at 12:20 pm said:
မွေးနေ.က(24.11.1993) ပါ wednesday။ ယုရဲ. ကံဇာတာလေးတွက်ပေးပါ။
win pa pa kyaw on October 9, 2011 at 8:58 pm said:
yadanar on October 10, 2011 at 2:10 pm said:
I was graduated with Civil Engineering.Now i am working at Singapore.Last year, i tried
to attend Master of Civil Engineering in Singapore but failed.I also want to try this year 2011 for attending.So kindly check for me whether i haveachance or not.My birthday is 26/Dec/1984.
အိမ့်ရတနာသွယ် on October 20, 2011 at 3:42 pm said:
အိမ့်ရဲ့ ပညာရေးကလေ ဘယ်လောက်ထိတိုးတက်နိုင်ပါ့မလဲဆရာ ဘ၀မှာပညာရေးနဲ့ အလုပ်လုပ်ရမှာပါလား
aung myo win on October 21, 2011 at 12:22 pm said:
အခုဖြေ စာမေးပွဲ က အောင်ပါ့မလား
Hein Htet on October 24, 2011 at 1:43 am said:
before i set for the exam, the only answer I got was I will fail, less chances to fail. I wasn’t happy so i asked every week. It turned out to be similar answers all the time,Like, Fail or very less chance to pass.
When the Result came out – I FAILED.
Except Tin Bo Bo others said I will pass.
wai wai on October 25, 2011 at 2:15 pm said:
i want to know whether the coming exam can pass or not
hnin cherry on November 14, 2011 at 11:41 am said:
ဖြေထားတဲ့စာမေးပွဲအောင်ပါ့မလားသိချင်ပါတယ် ပာူးရားက၄၃ပါ ၂၈.၄.၁၉၉၃ပါ
အောင်မင်းသူ on November 14, 2011 at 4:38 pm said:
လမင်းလေး on November 27, 2011 at 2:53 am said:
လမင်းလေး on November 27, 2011 at 2:55 am said:
ကျော်မင်း on December 14, 2011 at 8:56 pm said:
NAYLA on January 2, 2012 at 1:24 pm said:
shwe sin aye on March 2, 2012 at 12:52 pm said:
shwe sin aye on March 2, 2012 at 12:54 pm said:
drar Syar i want to know my education..
Yan Aung Moe on March 20, 2012 at 10:59 am said:
ကျွန်တော်ရဲ့ တက္ကသိုလ် ပညာရေးက ဒုတိယနှစ် နဲ့ တစ်ပိုင်းတစ်စ ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါ အဝေးသင် နဲ့ အစက ပြန်တက်မယ်ဆိုရင် ဘွဲ့ရကိန်းရှိမရှိသိချင်ပါတယ်။ အမည် – ရန်အောင်မိုး။ မွေးသက္ကရာဇ်-၇ ရက်၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ ဟူးရားဂဏန်း (၅၇) ဖြစ်ပါတယ်။
Han Nyein Soe on April 5, 2012 at 10:53 pm said:
ခိုင်စံပယ်ဖူး on April 25, 2012 at 3:29 pm said:
ဆရာရှင့် သမီးက8ရက်2လ1993မွေးတာပါ ပညာရေး ကျန်းမာရေး အချစ်ရေး လေးသိချင်လို့ပါဆရာ
နော်မီ on May 30, 2012 at 6:27 pm said:
maythetzin on December 12, 2012 at 11:03 am said:
26.11.2012 ရက်နေ့မှ30.11.2012 ရက်နေ့အတွင်ဖြေထားတာပါဆရာ
သဇင်လေးမောင် on December 12, 2012 at 12:52 pm said:
သမီးနာမည်က သဇင်လေးမောင်ပါ။(25.10.1988) အင်္ဂါ ၊ဟူးရားဂဏန်း (52) ဖြစ်ပါတယ်။အခု တက်နေတဲ.သင်တန်းက 4နှစ်တက်ရမှာပါ။သမီးဆက်တက်လျှင်အကျိုးရှိ၊မရှိသိချင်ပါတယ်.
Dr.Tin Bo Bo on December 13, 2012 at 10:20 pm said:
Dr.Tin Bo Bo on December 13, 2012 at 10:23 pm said:
ပြီးအောင် တက်လျှင်တော့ အကျိုးရှိနိုင်တယ်။ သို့သော် ဆက်မတက်ဖြစ်ဘဲ စိတ်ပြောင်းသွားတတ်တယ် (သို့) အခက်အခဲ ပြဿနာ တစ်ခုကြောင့် ဆက်မတက်ဖြစ်ဘဲ ရှိတတ်တယ်။ ပြီးအောင် အထူး ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုမယ်။
နှင်းကလျာစိုး on December 14, 2012 at 11:34 am said:
သမီး ဒုတိယနှစ်အဝေးသင်မြန်မာစာ ဖြေထားတယ် အောင်မအောင်ကြည့်ပေးပါဆရာ
Dr.Tin Bo Bo on December 14, 2012 at 2:39 pm said:
အောင်မြင် ပါလိမ့်မယ်။ အခြေအနေကောင်းပါတယ်။
နန်းမဉ္ဇူအေး on January 8, 2013 at 10:49 pm said:
ဆရာ။သမီးနာမည်က နန်းမဉ္ဇူအေးပါ။သမီးမွေးသက္ကရာဇ်က၂၇ ၈ ၁၉၈၉ တနင်္ဂနွေ ဟူးရာနံပါတ်က ၄၅။သမီးက မဟာပညာရေးဘွဲ့ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုတာ(2)နှစ်ရှိပါပြီ။မအောင်မြင်လို့ဒီနှစ်ထက်ဖြေမှာပါ။ကျေးဇူးပြု၍ အောင်နိုင် မအောင်နိုင်ကိုတွက်ပေးပါ ဆရာရယ်။စာမေးပွဲဖြေဆိုရမှာက မေလ လဆန်းလောက်ပါဆရာ။
aung kyaw moe on February 18, 2013 at 9:21 pm said:
ဆရာ..ကျွန်တော့်နာမည်ကအောင်ကျော်မိုးပါ..ကျွန်တော်က ၂၆.၆.၁၉၉၁ မှာမွေးပါတယ်…ကျွန်တော် ချမ်းသာတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာ တွက်ချက်ပေးပါဆရာ…ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ…
yan lin aung on February 19, 2013 at 12:50 pm said:
ဆရာကျနော့်နာမည်ကရန်လင်းအောင်ပါ။မွေးနေ့က၂ ၁၁ ၁၉၈၈ ရာဟုသားပါ။ဟူးရားနံပါတ်က၆ ပါ။ ပညာရေးနှင့်စီးပွားရေးကိုသိချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
sispaing on March 30, 2013 at 2:44 pm said:
jackson on May 15, 2013 at 11:01 am said:
not true . THIS SITE CAN GIVE U USELESS HOPE OR STRESS AND DEPRESSION .IT U WORKED HARD,U WILL BE THE ONE THAT GETS BENEFITS.PLEASE DON’T BELIEVE .JUST KEEP FAITH IN YOURSELF. bUT dr. TIN BO BO. I WONDER IF U CAN REALLY SAT ABOUT MY LIFE.MY BIRTHDAY IS 11.2.1997.PLZ THINK ABOUT MY EDUCATION AND REPLY.BECAUSE I WANT KNOW IF THIS SITE IS REALLY USEFUL
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,633)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,969)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,718)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,347)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,416)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,560)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,582)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,949)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,290)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,271)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,095)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,048)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,832)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,792)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,302)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,129)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,834)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,490)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,184)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,160)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,828)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,681)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,578)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,550)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,261)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,239)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,900)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,687)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,477)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (6,023)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !
14 Users Online	Link1 | Link2 | Link3Copyright © 2013. Compu BayDaThuKhuMa. Designed by CompuBayDaThuKhuMa.